Fishers And Related Fishing Workers Job Description / တာဝန်တွေပြီးတော့ခံမှုနမူနာ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / Fishers And Related Fishing Workers Job Description / တာဝန်တွေပြီးတော့ခံမှုနမူနာ
Fishers And Related Fishing Workers Job Description / တာဝန်တွေပြီးတော့ခံမှုနမူနာ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 601 views
Employ netting, traps, fishing rods, or other devices to catch and get bass or additional marine creatures from streams, စိမျ့မွေ, or seas, regarding man usage or additional uses. May take game onto deliver.
Manage the purchase of products for example energy, netting, နှင့်ဝါယာကြိုးများ, tools တွေ, နှင့်ပစ္စည်းများ.
Add netting, လောက်လွှဲ, ချိတ်, ဓါး, or raising equipment to cables, booms or dredges.
Clean units, conveyors, ဓါးသွား, and also other tools, လျှောက်ထားစုတ်တံ, detergents, and water.
Link equipment such as for example drifts, dumbbells, အလံ, အလင်းအိမ်, or markers to nets, သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်း, or traps.
Crop marine-life regarding people or pet ingestion, dredging equipment, contains, လှေ, rods or employing diving, reels, or tackle.
Take part in illness handle, wildlife operations, နှင့်လေ့လာမှုလှုပ်ရှားမှုများ.
လက်ရှိပြောနေကြသည်အခွားအဘယျရှေးရှေးမှတက်ကြွစွာနားထောင်ခြင်း-တင်ပြတစ်ခုလုံးကိုအာရုံစူးစိုက်မှု, taking time to realize the details being made, သင့်လျော်သောအဖြစ်တောင်းခံမေးမြန်းချက်, and not stifling at wrong situations.
Thinking that is critical-Using judgement and thought to recognize the skills and flaws of approaches, တွေ့ရှိချက်များသို့မဟုတ်ကိစ္စရပ်များအားမှရှေးခယျြမှုအဖြေကို.
Tracking-Overseeing/Determining functionality of corporations, အပိုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်များ, or oneself to produce changes or take remedial steps.
othersI ခြေလှမ်းများပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူ Dexter-မွမ်းမံလုပ်ရပ်များ.
အရစ်ကျ-ထည့်သွင်းခြင်းစက်တွေ, devices များ, cabling, သို့မဟုတ် packages များယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်တာတွေတွေ့ဆုံရန်.
function ခြေရာကောက်-လေ့လာခြင်း features တွေ, နာရီမျက်နှာပြင်, or different signs to make sureamachine is currently working effectively.
Quality Control Research-Conducting examinations and checks of items, ဖြေရှင်းနည်းများ, ထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့စစ်ကြောစီရင်တော်မူရန်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို.
Systems Analysis-Determining what sort of process should operate and how modifications in problems, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, along with the setting may impact results.
Systems Evaluation-Determining procedures or indications of system performance along with the behavior hadaneed to boost or accurate effectiveness, စက်၏ရည်မှန်းချက်မှဆွေမျိုး.
Operations of Money-Determining how income will be used to obtain the job performed, ဤအသုံးစရိတ်များများအတွက်စာရင်းရေးသွင်းခြင်း.
Operations of Materials Resources-Receiving and discovering towards the suitable usage of equipment, အဆောက်အ, and components needed seriously to do certain function.
Administration of Workers Resources-Aiming individuals as they, လေးလည်း, နှင့် function ကိုအားပေးအားမြှောက်, အလုပ်များအတွက်အထိရောက်ဆုံးလူတွေကွဲပြားခြားနားသွား.
တစ်ဦး High School တွင်ဒီပလိုမာထက်သိသိသာသာလျော့နည်း
အကြီးတန်း High School တွင်အဆင့် (GED သို့မဟုတ်မြင့်မားသော-School တွင်ညီမျှသောအရည်အချင်းသို့မဟုတ်)
ကျော်လွန် 1 ခုနှစ်, အထိ 24 လနှင့်အပါအဝင်,
တည်မြဲခြင်း – 90.24%
ထိန်းချုပ်ရေး – 84.29%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 85.96%
အခြားသူများအဘို့စိုးရိမ်ပူပန်မှု – 83.33%
လူမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 81.12%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 88.68%
ဖိအား Threshold – 83.60%
customization / လွတ်မြောက်ရေး – 81.27%
တည်ငြိမ်ခြင်း – 85.86%
အသေးစိတ်၏အသိအမြင် – 87.92%
ရိုးသားခြင်း – 87.11%
လွတ်လပ်ခြင်း – 82.60%
သစ်လွင်မှု – 86.52%
စဉ်းစား – 82.93%